Taariikhda Xiriirka Soomaali iyo Oromo | SAHAN ONLINE
Saciid Shidaad X. Xussein
Soomaali iyo Oromo waxay ka wada tirsan yihiin Kuushiga Bari oo ay isla sii yihiin Kuushiga Bari ee Dhul-hoosaadka (KBH) marka la barbardhigo Kuushiga Bari ee Dhul-koraadka (KBK) sida Hadiya iyo Sidamo. Markaas dhalasho ahaan, Soomaali iyo Oromo (iyo Cafar-Saho) dadka ayaga ayaa isu xiga. Sidoo kale, dhaqanka labada dhinac waa isku asal. Laakin Oromadu markasta waxay dhaqan ka qaadanayeen Soomaalida sida ay ina tusayaan ereyada: ayaan, xaal, magaalo, amley iyo abaanduule. Waxaa kale oo la xusay in Oromadu Soomaalida ka barteen farda-fuulka, gaashaanka, iyo waranka xilligii amiir Nuur[i], iyo markaas kadib geel-dhaqashada. Tan ugu weynise waxay tahay Diinta Islaamka. Oromada bari waxay Islaamidda badanaa bilaabeen qarnigii 19aad, badankooduna waxay ku islaameen sabab Soomaalida leedahay.[ii] Laakin xiriirka dhuleed ama juqraafi ee Soomaali iyo Oromo si weyn oo qaldan ayaa loo macneeyay taaso sabab u ah xiriirkooda siyaasadeed ee sii burburaya.Dhib laga Dhaxlay Khuraafo Taariikheed
Muddadii 1854-1964 sahamiyayaasha iyo cilmi-baarayaasha reer galbeedku waxay ababinayeen ra’yi ah in Soomaalidu dhulka hadda ay degen yihiin ay ka qabsaden dadka Gaalla kunkii sano ay la soo dhaafay. Gaalla waa magaca dhawaan ka hor loo yiqiin Oromada. Asal ahaan ra’yiga waxa laga maqlay Speke iyo Richard Burton oo Inglish ahaa oo 1854 tii sahan ku kala maray Sanaag iyo Awdal. Waxay isku qaldeen magaca ‘gaal’ iyo kan ‘Gaalla’. Markasta oo ay Soomaalida ka maqlaan ereyga gaal waxay u macneysanayeen ‘Gaalla’.[iii]
Hasa yeeshe madraso ama akademi ahaan waxaa qarnigi tagay ra’yiga meel mariyey Enrico Cerulli oo Talyaani ahaa iyo I.M Lewis-kii London. Qalad dheeraad ah ayay sii galeen oo waxay isku sii qaldeen ereyada gaal (geel), gaal (kaafir) iyo Gaalla (Oromo) daliil kale oo cilmi ahna ma ay keenin. Arinta la yaabka lihi waxay tahay ayagoo taariikhda Soomaalida ula macaamilay sida wax ku siman kun sano oo kali ah.
Xogbaarihii ugu horreeyay oo ogaaday in ra’yigaasi qaldan yahay wuxuu ahaa Oscar Neumann kadib markuu kula kulmay 1902 dii qabiil Soomaali ah oo qadiim ah (Bayso) harada Abaaya, xadkii Oromo, Sidamo, iyo Jiido ee waagaas. Wuxuu soo jeediyay in tariikhda Soomaalidu ka fac weyn tahay sida loo qaatay.[iv] Laakin xogtiisa lama danayn ama dhab looma ogaan ka hor 1964-tii.
Si kastabee, qaladkaas waxaa la bilaabay in la saxo bartamaha 1960-aadki. Herbert lewis (1962 iyo 1966) Harold Fleming (1964) iyo E. Turton (1975) waxay sharxeen in waxa kaliya oo caddeen loo hayaa ay tahay in Soomaalidu waqti dheer ku sugnaayeen dhulkooda; marka ay Oromadu ku sugnaayeen oo kaliya dhul Galbeed ka xiga Nageyle oo ah manbaca koonfureed ee wabiga Jubba ka hor qarnikii 16aad; ayakoo waqtigaas bilaabay inay ku soo fidaan dhulka Soomaalida.[v] Ra’yii hore waqtigaas ayaa la tuuray marka laga reebo I.M. Lewis oo isku sii dhajiyay sabab aan la garanayn owgeed, iyo hadaaqa jahliga ku dhisan ee kuwa bowsaday khuraafadii mar fakatay.[vi]
Halkan Akhirso Taariikhda Xiriirka Soomaali iyo Oromo WQ Saciid Shidaad X. Xussein
La soco qaybta 2aad:
Duulaankii Oromo ee Qarniga 16aad
W/Q:-Saciid Shidaad X. Xussein